Diiwaan gelinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka oo maanta bilaabaneysa – STAR FM SOMALIA
Diiwaan gelinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka oo maanta bilaabaneysa
Guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaciyay in maanta bilaabaneyso diiwaan gelinta musharixiinta dooneysa xilka guddoonka baarlamaanka iyo ku xigeenadiisa.
C/raxmaan Ducaale Beyle, guddoomiyaha guddiga qaban qaabada doorashada guddoonka baarlamaanka, ayaa sheegay inay maanta bilaabayaan diiwaan gelinta dadka doonaya inay xilalkaasi qabtaan.
Maanta oo Tallaado ah ayuu sheegay Mr Beyle xarunta golaha shacabka inay ka bilaabaneyso diiwaan gelinta musharixiinta guddoonka , ku xigeenka koowaad iyo ku xigeenka labaad ee baarlamaanka.
C/raxmaan Ducaale, ayaa sidoo kale sheegay in maalinta Khamiista ee soo socoto oo bisha Janaayo ku beegan tahay 5, ay ku eg tahay diiwaan gelinta musharixiinta guddoonka baarlamaanka.
Wuxuu rajo wanaagsan ka muujiyay waqtiga loo qorsheeyay doorashada inay ku dhacdo oo uusan imaan wax dib u dhac ah.
Guddigan ayaa shaqadooda waxay ku eg tahay marka la doorto hogaanka baarlamaanka Soomaaliya, sida uu sheegay guddoomiyaha guddiga doorashada baarlamaanka C/raxmaan Ducaale Beyle.
Taliyaha Ciidanka Uganda oo booqasho ku yimid Magaalada Muqdisho.
Koonfur Kuuriya oo muwaadiniinteeda uga digtay inay Soomaaliya u safraan